Ihe mere o ji na-afụ ụfụ n'okpuru ubu ubu aka ekpe: ihe kpatara ya, ọgwụgwọ
Mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe si n'azụ
N'ụzọ bụ isi, ihe mgbu n'okpuru scapula n'aka ekpe n'azụ azụ na-abụkarị ihe e ji mara ndị agadi, ma ọtụtụ mgbe ọrịa yiri ya na-egosipụta onwe ya na nwata. Ọnọdụ na-ezighi ezi, ihe nketa ma ọ bụ mmerụ egwuregwu nwere ike ịbụ ihe kpatara ọnọdụ a na-ajụ. Isi ihe na-akpata mgbu n'okpuru ubu aka ekpe site n'azụ site na azụ kwesịrị ka a tụlee nke ọma. A sị ka e kwuwe, a pụrụ iwere ahụ erughị ala a dị ka ezi ihe mere ị ga-eji gaa ọkachamara.
Mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe, ọ bụghị nanị ihe mgbaàmà kpọmkwem n'echiche ahụike, bụ otu n'ime mgbaàmà ndị nwere ike igosi ọrịa dị iche iche. Ntụle oge na nke ziri ezi nke ọdịdị mgbu, nhazi ya na-enyere dọkịta aka ịhọrọ ụzọ ziri ezi maka nyocha nyocha ma nye aka, na-emekarị ngwa ngwa n'ọnọdụ nke ọrịa obi ma ọ bụ eriri afọ.
Ihe na-akpata mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Ndepụta mkpokọta nke ihe na-akpata mgbu n'okpuru agụba ubu aka ekpe bụ nke a:
Ọrịa nke sistem musculoskeletal:
Osteochondrosis nke thoracic ma ọ bụ cervical spain.
mmerụ ahụ na-emerụ ahụ na scapula (mmerụ mkpakọ na akwara suprascapular).
Ọrịa Sprengel (scapula alata) - pterygoid scapula.
Ọrịa nke usoro broncho-pulmonary:
Ka oyi baa n'akụkụ aka ekpe.
Pleurisy (akọrọ, akụkụ aka ekpe).
Tracheobronchitis na arụ ọrụ nke autonomic.
Ọkpụkpụ nke ngụgụ aka ekpe.
IHD - ọrịa obi ischemic.
Angina pectoris (kwụsi ike, kwụsiri ike).
Obere - aortic aneurysm.
Ọrịa nke eriri afọ tract:
YABZH (Ulcus gastrica) - ọnyá afọ nke afọ.
Ulcus duodenal - ọnya afọ.
Spasm nke esophagus.
GERD bụ ọrịa reflux esophageal gas.
Ọ na-adịkarịghị - mmụba nke pancreatitis.
Ihe na-akpata mmụọ nke na-akpalite VSD bụ vegetative-vaskụla dystonia nwere mgbu na-egosipụta n'akụkụ aka ekpe nke azụ.
Ihe na-akpatakarị mgbu n'okpuru ubu aka ekpe n'ihe gbasara mgbasa bụ ndị a:
Cervical osteochondrosis, nke na-egosipụtakarị onwe ya dị ka mgbu dị n'akụkụ ala nke os occipitale - ọkpụkpụ occipital. Ihe mgbu na-egbu mgbu na ọdịdị, na-esiwanye ike na mmegharị isi na-arụ ọrụ mgbe niile ma na-egbuke egbuke n'okpuru ubu ubu, n'ime ogwe aka. Ọzọkwa, osteochondrosis nke cervical spain na-esonyere dizziness, nhụsianya, paresthesia na elu aka.
Intercostal neuralgia, nke na-etolite n'ihi osteochondrosis ma ọ bụ n'ihi ihe ndị ọzọ. A na-egosipụta Neuralgia site na lumbago, oke mgbu n'úkwù na-enwu n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe, mgbe mgbe n'okpuru ubu ubu.
GU (ọnya afọ). Ihe mgbaàmà na-abụkarị n'ihi oge oge, dabere na ihe oriri na-edozi ahụ ma mara ya site na paroxysmal, nke na-egbuke egbuke, nke na-ekewa n'ime ụlọ ọgwụ dị ka ndị a:
Ihe mgbaàmà mgbu na-agụ agụụ nke na-etolite mgbe ogologo oge gasịrị mgbe erichara nri (awa 6-8).
Ihe mgbaàmà mgbu nke mbụ nke na-etolite ozugbo erichara nri nwere ike igosi na azụ azụ, n'okpuru ubu ubu ma na-ebelata mgbe a chụpụrụ ihe dị n'ime afọ.
Ihe mgbaàmà mgbu nke na-eme 2-3 awa mgbe nri gasịrị.
Ihe mgbaàmà nke abalị, nke a na-eji ihe mgbu na-egbuke egbuke n'okpuru ubu ubu.
Mgbu na YABZH nwere ike ibelata ma ọgbụgbọ ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ.
Mgbaàmà nke mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Ihe ịrịba ama, ihe mgbaàmà nke mgbu na mpaghara ala nke scapula bụ n'ihi usoro pathogenetic ndị dị otú ahụ:
Kechie ihe mgbu site na mpụta mpaghara n'otu akụkụ. Ihe mgbaàmà a na-adịgide adịgide, obere oge - paroxysmal, ihe mgbu nwere ike ịbawanye na iku ume miri emi, mkpụmkpụ ume, ụkwara, na mmegharị ahụ. Ihe mgbaàmà a bụ n'ihi mgbasa nke mkpali mgbu n'akụkụ ebe oghere intercostal muscle, aponeurosis.
Ọkụ na-egbu mgbu na paresthesias, nke na-ebute site na nnyefe nke mkpali tinyere ebe akwara akwara, alaka akwara. A na-egosipụta mgbu na mpaghara obi, na azụ, na ala azụ ma ọ bụ n'okpuru ubu ubu.
Na-abawanye mgbu na-egbuke egbuke n'okpuru scapula, n'ime ogwe aka, jikọtara ya na hypertonicity nke uru nke ubu, scapula, azụ.
Mgbaàmà mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe nwere ike ịdị ka ọ nwere ike ịdịgasị iche site na mgbu, na-anabata ya na nkọ, ọkụ, ịcha. Enwere ụfọdụ mkpesa mgbu n'okpuru ubu aka ekpe sitere n'aka ndị ọrịa:
Ihe mgbu dị ukwuu na azụ ekpe n'okpuru scapula, mmetụta mgbu na-esiwanye ike mgbe ọ na-atụgharị, na-agagharị ma na-ebelata na izu ike.
Ịcha mmetụta n'aka ekpe, na-agafe na mpaghara n'etiti ubu ubu.
Ihe mgbu na-egbu mgbu n'okpuru ubu n'aka ekpe, na-enwe mmetụta mgbe ebuliri ogwe aka (s) elu. A na-ejikọta mgbu na ọnọdụ ụfọdụ nke ahụ.
Na-adọta mmetụta nke mgbu, mgbaàmà ahụ na-agbatị n'okpuru scapula aka ekpe na azụ azụ. Ihe mgbu na-adịgide adịgide, ọ bụghị ọgwụ na-enye obi ụtọ na-ebelata.
Mgbaàmà, ngosipụta nke mgbu n'okpuru scapula n'aka ekpe nwere ike jikọta dị ka ihe ịrịba ama etiological dị ka ndị a:
Ọrịa obi: IHD, myocardial infarction, angina pectoris Ihe mgbu na-amalite na mpaghara retrosternal (obere oge n'etiti azụ) ma gosipụta ya n'akụkụ aka ekpe - ogwe aka, agba, n'okpuru ubu ubu, azụ. Ihe mgbu na-agbasa na ọdịdị, na-eme ka mmetụta nke ịpịa, ọkụ
Aneurysma dissecans - aortic aneurysm A na-akọwa mgbaàmà mgbu dị ka mgbe niile, na-eto eto, na-esonyere ya na nkọ, na-agbapụ mmetụta n'aka ekpe na azụ, n'okpuru ubu ubu. Mgbu na-etolite ngwa ngwa ma bụrụ ihe mgbaàmà na-eyi ndụ egwu
Ọrịa pericarditis - ọrịa Na-atụgharị n'akụkụ aka ekpe nke ihe mgbu na-ebelata na izu ike, n'ọnọdụ oche, mgbe ị na-ehulata n'ihu
Pleuritis - ọrịa Ihe mgbaàmà mgbu dị nkọ, nke na-egbu egbu, nke ike ya dabere na omimi nke iku ume. Enwere ike ịme ihe mgbu dị ka nkwụsị n'okpuru ubu ubu, na ume miri emi - dị ka ịkpụ, dị ike, ịbanye.
oyi oyi akụkụ aka ekpe Ihe mgbu ahụ adịghị agwụ agwụ, na-egbu mgbu, na-adịru nwa oge, nwere ike ịbawanye na mmegharị ahụ, iku ume miri emi, ihe mgbu na-egosipụta n'okpuru scapula dị ka "isi ihe" mpaghara.
Cervical osteochondrosis Na-egbu mgbu, ịdọrọ mgbu, nke na-abawanye na static ma ọ bụ mgbe mgbatị ahụ gasịrị, mgbaàmà mgbu nwere ike igosi n'aka ekpe, gụnyere n'okpuru ubu ubu. Mgbu, n'adịghị ka cardialgia, ọgwụ obi anaghị akwụsị.
Ulcerative usoro na eriri afọ tract Ihe mgbu na-esiwanye ike, a naghị anabatakarị ya. Site na perforation na mpaghara obi nke afọ, ihe mgbu na-egosipụta n'aka ekpe na azụ azụ. Ihe mgbaàmà mgbu na mmalite nke usoro ahụ na-ebelata mgbe ọgbụgbọ
Mgbu n'aka ekpe n'okpuru ubu ubu
Mgbu dị n'aka ekpe na mpaghara ala nke scapula nwere ike jikọta ya na ọrịa ndị dị otú ahụ:
Usoro ọnya afọ na eriri afọ. Dị ka a na-achị, ihe mgbaàmà mgbu na-abawanye - na ọrịa na-adịghị ala ala nke nta nke nta, na-emewanyewanye ma ọ bụ perforation - ngwa ngwa. Ihe mgbu mgbu, agbapụ, gosipụtara nwere ike ibelata mgbe a chụpụrụ nri n'ime eriri afọ ma ọ bụ site n'enyemaka nke vomiting.
Neurogenic mgbu, VVD (vegetative-vaskụla dystonia). A na-enwe mmetụta mgbu dị ka ịpị, ịpị, gbasaa n'aka ekpe, mgbe mgbe n'okpuru ubu ubu. A na-egosipụtakwa VVD site na arụ ọrụ iku ume na-adịghị mma, ịba ụba ọsụsọ, ịma jijiji aka, mmetụta nke spasm, coma na akpịrị, mmetụta egwu, ụjọ.
Mgbu dị n'aka ekpe n'okpuru scapula nwere ike jikọta ya na myocardial infarction na-emepe emepe, nke a na-echekarị dị ka ọgụ ọzọ nke ọrịa akwara obi, angina pectoris. Ihe mgbaàmà mgbu, dị ka a na-achị, na-amalite ịmalite na mpaghara retrosternal, obere oge site na azụ azụ, na-egbuke egbuke n'akụkụ aka ekpe, "na-ada" ma na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ.
Cervical osteochondrosis, obere oge osteochondrosis nke mpaghara thoracic. Ọrịa a na-esonyere ya na njirimara na-egbu mgbu, mana mgbaàmà mgbu na-anabata ya, nke nwere ike ịbawanye ibu na ibu, gụnyere static.
Ekwesiri iburu n'uche na maka ihe omuma ihe omuma nke oma, o di oke mkpa iji kọwaa mmetụta, ọdịdị nke mgbaàmà mgbu, nke nwere ike ịbụ ndị a:
Mgbu na-egbuke egbuke n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Nkọwa nke mgbaàmà dị otú ahụ bụ àgwà a na-ahụkarị nke na-egbuke egbuke mgbu, nke na-akpata pathological nke nwere ike ịdị n'ebe dị anya site na ebe mgbu. Mgbu na-enye n'okpuru ubu ubu aka ekpe na-enwekarị ọrịa nke afọ na obi. Mpaghara obi nke afọ, na-enwe usoro mkpali ma ọ bụ erosive, na-egosipụtakarị onwe ya dị ka mgbu na-egosipụta n'aka ekpe. Maka dọkịta nwere ahụmahụ, ọ naghị esiri ike ịchọpụta isi ihe mgbu dị ka atụmatụ nchọpụta nke Zakharyin-Gedd ma ọ bụ Gaava-Luvsan si dị. Emebere usoro ndị a iji mee ka ọdịiche dị n'ihe ịrịba ama ụlọ ọgwụ nke ihe mgbu na-ezo aka dị ka nnyefe nke mkpali kpọmkwem n'akụkụ ụzọ autonomic nke usoro ụjọ ahụ na mpaghara mgbaàmà.
Na-ere ọkụ n'okpuru ubu ubu
Nke a bụ ihe mgbaàmà nke neuralgia intercostal mepere emepe, usoro nrụrụ na-adịte aka na ọkpụkpụ azụ. Otú ọ dị, mmetụta nke mgbu na-ere ọkụ bụ ihe kachasị mma maka ọgụ nke angina pectoris na ọnọdụ dị njọ karị, nke na-eyi ndụ egwu - myocardial infarction.
Ihe mgbu mgbe niile n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Mgbu mgbe niile n'okpuru ubu ubu aka ekpe, nke oyi baa na-akpata, nwere ike ibelata n'ọnọdụ kwụ ọtọ, mgbe ahụ na-atụgharị n'akụkụ ahụ ike.
Mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe na ụkwara na-egosi mbufụt akụkụ aka ekpe nke ngụgụ, nke a na-egosipụtakwa site na mgbaàmà ndị a:
Akọrọ, ụkwara na-adịkarịghị mmiri. Ihe mgbaàmà kachasị, na mgbakwunye na mgbu n'okpuru ubu aka ekpe, bụ ọnụnọ nke pus ma ọ bụ ọbara na sputum. Ọbụlagodi otu mgbapụ nke ụdị a kwesịrị ịbụ ihe kpatara nyocha ozugbo na mmalite ọgwụgwọ.
Subfebrile ahụ okpomọkụ, nke na-adịkarịghị ebili. Hyperthermia bụ ihe e ji mara ogbo nke iwe ọkụ nke oyi baa.
Mgbu na-agbasa na ngụgụ emetụtara. Ihe mgbaàmà mgbu na-esiwanye ike na ume miri emi, iku ume ugboro ugboro, mgbatị ahụ, ụkwara. Anụ ahụ ngụgụ enweghị ndị na-anabata ihe mgbu, ha nọ naanị na pleura, yabụ enwere ike iwere mgbaàmà ọ bụla na-egbu mgbu dị ka ihe mgbaàmà nke pleurisy. Ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị otú ahụ mgbaàmà na usoro nrụrụ nwere ike ime na spine cervical.
Mmetụta nke iku ume, mkpụmkpụ ume, na-emighị emi, ume ngwa ngwa.
Ịkpagide mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe si n'azụ bụ ihe mgbaàmà mgbu nke etinyere na azụ. Na omume ụlọ ọgwụ, a na-akpọ ihe ngosi dị otú ahụ scapular-costal thoracalgia, ma ọ bụ mgbu vertebrogenic. Ọ ga-ekwe omume ịmata ọdịiche dị n'ihe mgbu n'okpuru ubu aka ekpe site n'azụ site na ọnọdụ obi n'ụzọ dị otú a:
Mgbaàmà Ọrịa obi Ischemic (cardialgia) Vertebrogenic mgbu
Nkọwa nke mgbu Ịpị, mkpakọ, ọtụtụ mgbe na mpaghara retrosternal, na ntụgharị uche n'aka ekpe. Ụjọ na-eso ya Ịkpagide, ịpị, ọkụ na-enweghị nchekasị, tachycardia
Ugboro mgbu Oge dị mkpirikpi, paroxysmal (ọtụtụ nkeji, ọ na-adịkarịghị ruo ọkara elekere) Obere oge - obere oge, na-abụkarị nke na-ewe ọtụtụ awa, ikekwe ụbọchị
Mgbanwe na ọnọdụ ahụ Adịghị emetụta ọdịdị nke mgbu Mmetụta, nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata mgbaàmà mgbu
Mmetụta nke mmega ahụ Na-emetụta, na izu ike mgbu nwere ike ibelata Mgbu nwere ike ịdịgide na izu ike, ma daa mgbe mgbatị ahụ gasịrị, n'ihi na enwere mgbanwe n'ọgba aghara akwara.
Mmetụta nke ọgwụ ọjọọ A na-ewepụ ihe mgbu site na ọgwụ obi A na-ebelata ihe mgbu site na antispasmodics na analgesics. Nitrates (ọgwụ obi) anaghị emetụta ọdịdị mgbu ahụ
Mmetụta ọgwụgwọ ntuziaka Fọrọ nke nta ka ọ nweghị mmetụta Enyemaka dị ịrịba ama n'ihi ntọhapụ nke mgbọrọgwụ akwara abịakọrọ
Ịpị mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Nke a bụ ihe ịrịba ama nke osteochondrosis na-eto eto, ihe nwere ike ịmalite ịwakpo ọrịa akwara ọbara, yana ihe akaebe na-egosi mmụba nke vegetative-vaskụla dystonia. Ịpị ihe mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe, nke a na-eche ka ọ na-agbawa, na-ere ọkụ, chọrọ nlekọta ahụike ozugbo na enyemaka nke ọgụ ahụ, n'ihi na o yikarịrị ka ọ na-ejikọta ya na angina pectoris ma ọ bụ ọnọdụ ọrịa mbụ. Ịpị ihe mgbu n'okpuru ubu aka ekpe nwekwara ike igosi ọgba aghara vegetative-vaskụla, nke yiri nnọọ ihe mgbaàmà na mgbu obi, mana ọgwụ obi anaghị akwụsị ya, kama ọ na-enye ndị na-enye ọgwụ ike ma ọ bụ ndị na-eme ka ahụ dị jụụ. Ọzọkwa, a na-egosipụta VSD site na enweghị njikọ na-akpata n'etiti mgbu na mmega ahụ, ibu, ebe ọrịa akwara obi nwere ike ime ka ọ dịkwuo njọ site n'inwebiga ihe ókè, ọrụ siri ike.
Mgbu mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Nke a yikarịrị ka ọ bụ ngosipụta nke mpụta n'akụkụ aka ekpe nke diski intervertebral nke cervical ma ọ bụ sternal spain. Na mgbakwunye na eziokwu na diski herniated gosipụtara onwe ya dị ka ihe mgbu na-egbu mgbu n'okpuru ubu aka ekpe, ọ na-esonyere ya na isi ọwụwa, ọbara mgbali elu na-akwụghị ụgwọ, dizziness, paresthesia nke aka ekpe. Ọ nwekwara ike imerụ ubu aka ekpe, akụkụ aka ekpe dum nke azụ na azụ azụ. A na-achọpụta nrịanrịa site na iji MRI, redio. Ọkpụkpụ n'okpuru scapula nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke mgbasa aortic mmalite. Aortic aneurysm bụ ọnọdụ na-eyi ndụ egwu, mgbawa ya na-achọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nlekọta ahụike ozugbo, nke na-adịghị ekwe omume mgbe niile, ya mere, ihe ọ bụla na-egosipụta, na-egbu mgbu na azụ, na mpaghara nke ubu kwesịrị ịbụ ihe kpatara a. nyocha zuru oke na neutralization nke isi ihe kpatara mgbaàmà ahụ.
Mgbu mberede n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Nwere ike metụtara mkpakọ, . mmerụ akwara suprascapular. A na-egosipụta mmerụ ahụ dị otú ahụ site na mgbu mberede dị nkọ na ala nke scapula, ihe mgbaàmà mgbu nwere ike gbasaa n'ubu ma belata ọrụ moto nke ogwe aka. Ọzọkwa, mgbu mberede n'okpuru ubu ubu aka ekpe na-egosi radiculopathy, bụ nke mgbọrọgwụ akwara na-emebi n'akụkụ aka ekpe nke diski intervertebral nke cervical, na-adịkarịghị ala azụ thoracic. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke abụọ, nke bụ ihe na-akpata nrụgide na-adịghị ala ala na njedebe akwara site na osteophytes, anụ ahụ articular herniated. Usoro mmebi ogologo oge, dị ka a na-achị, na-esonyere ya na mgbu na-egbu mgbu mgbe niile, Otú ọ dị, enwere ike ime ka ọ dịkwuo njọ na mberede site na mpụta nke hernia intervertebral ma ọ bụ ọzịza siri ike na mpaghara mgbanwe. Ọ na-adịkarị obere, mgbu mberede na agụba ubu aka ekpe nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ngụgụ aka ekpe dara ada (pneumothorax). Ọnọdụ ndị dị otú ahụ na omume ụlọ ọgwụ anaghị adịkarị, Otú ọ dị, na mberede, mgbu dị nkọ na mkpụmkpụ ume na dizziness bụ ihe kpatara ịkpọ nlekọta mberede.
Ihe mgbu dị nkọ n'okpuru agụ ubu aka ekpe
Ọ nwere ike igosi ọgụ nke angina pectoris, nke "na-amalite" site na mpaghara retrosternal ma gosipụta onwe ya na mgbu mgbu na-egosipụta n'akụkụ aka ekpe. Mgbu na angina pectoris na-akọwa dị ka nkọ, squeezing, squeezing, mgbaàmà ahụ nwere ike ibelata na ezumike na mgbe ị ṅụsịrị ọgwụ ụfọdụ - validol, nitroglycerin, na ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka ọbara na-arụ ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu ihe mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe nwere ike ime site na nkwụsị aka ekpe nke diski intervertebral, mgbaàmà ahụ na-akawanye njọ site na mmegharị ahụ, na-agbanwe ọnọdụ ahụ, ya bụ, site n'ịgbanwe ọnọdụ nke ọkpụkpụ azụ ma ọ bụ ọgịrịga.
Ọdịdị na-egbu mgbu nke mgbu na-egosi usoro na-adịghị ala ala, ogologo oge nke na-akpalite mgbaàmà. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikọta ihe mgbu na-egbu mgbu na osteochondrosis nke spine cervical, yana ọrịa obi na-adịghị ala ala - myocarditis, pericarditis. Aching mgbu n'okpuru ekpe ubu agụba na mbufụt nke obi muscle (myocarditis) bụ ejighị n'aka, ọ nwere ike na-triggered site overstrain, ike ọgwụgwụ, nchekasị na-esonyere mkpụmkpụ nke ume, pallor nke anụ ahụ, n'ozuzu ogbenye ọnọdụ, ọgbụgbọ.
Ihe mgbu na-adịghị ala ala n'okpuru ubu ubu aka ekpe
A na-ejikọkarị ya na osteochondrosis nke cervical ma ọ bụ thoracic. A na-eji mmalite nke ọrịa ahụ site na mgbu na-adịghị ike na-apụta na mmebi nke mgbọrọgwụ. Na-adọkpụ, mgbe ụfọdụ subsiding sensations na mbụ oge adịghị n'ezie nsogbu mmadụ, ebe ọ bụ na ha bụ nnọọ ndidi, Ọzọkwa, ihe mgbu nwere ike akwụsị mgbe okpomọkụ, ịhịa aka n'ahụ, na-asa ahụ na a na-ekpo ọkụ bat.
Ihe mgbu siri ike n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Nke a bụ ihe mere ị ga-eji kpọtụrụ dọkịta ozugbo, ebe ọ bụ na mgbaàmà mgbu siri ike abụghị ihe a na-ahụkarị maka mpaghara scapular, ya mere, ọ na-ejikọta ya na ọnọdụ dị njọ, ikekwe na-eyi egwu. Kachasị mma, oke mgbu n'okpuru ubu aka ekpe nwere ike igosi intercostal neuralgia, mana ihe na-emenye ụjọ nwere ike ịbụ ọnya afọ ma ọ bụ ọnọdụ ọrịa mbufụt, nkụchi obi. N'ọnọdụ ebe mgbaàmà ahụ jikọtara ya na PUD (ọnya afọ), mmadụ na-enwe mmetụta dị egwu nke na ọ pụghị ịkwaga, na-agbanye aka ma ọ bụ ụkwụ ya na mpaghara ọrịa.
Ọ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke intercostal neuralgia, nke ikpe ahụ na-eme ka neuropathy dịkwuo njọ site na palpation nke mpaghara mgbu, na ume miri emi, mgbe enwere mmetụta na ume "na-ejide". Iwe nke njedebe akwara, mgbọrọgwụ nwere ike na-adịgide adịgide, ma ọtụtụ mgbe episodic nkọ mgbu na-ahụkarị maka neuralgia, ike ya na-ebelata na izu ike ma ọ bụ mgbe ọkụ gasịrị, na-eme ka mpaghara mgbu ahụ dị jụụ. Ọzọkwa, a nkọ mgbu n'okpuru ekpe ubu agụba bụ e ji mara ekpe-n'akụkụ ka oyi baa na nnukwu oge, mgbe onye ọrịa na-eche stabbing, igbu mgbaàmà na niile ekpe ọkara nke obi, na-egosipụta n'okpuru ubu agụba. Ogbe oyi na nnukwu ogbo na-esonyere ụkwara, nke na-eme ka mgbu ka njọ, na pus ma ọ bụ ọbara nwekwara ike ịpụta na sputum. Ọtụtụ mgbe n'akụkụ aka ekpe nke azụ, na mpaghara scapula, a na-egosipụta ihe mgbu n'oge oke nke pancreatitis, nke a na-eji gburugburu, mgbu mgbu.
Na-ese ihe mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Ọtụtụ mgbe, a na-ejikọta ya na nchịkwa nke mkpali mgbu n'akụkụ akwara intercostal ma na-akpata osteochondrosis cervical na mmalite mmalite nke mmepe. Mkpakọ mgbe niile nke mgbọrọgwụ akwara na-akpalite ndidi, na-egbu mgbu, na-adọta ihe mgbu n'okpuru ọkpụkpụ occipital, nke nwere ike igosi na mpaghara aka ekpe ma ọ bụ aka nri nke azụ, ogwe aka.
Nchọpụta nke mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe
Ihe dị iche iche nke mgbaàmà na thoracalgia dị n'akụkụ aka ekpe bụ ihe siri ike, ebe ọ bụ na mgbu abụghị kpọmkwem ma nwee ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ọtụtụ ọrịa na ọnọdụ, gụnyere ndị chọrọ nlekọta ahụike mberede. Nchọpụta nke mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe chọrọ usoro mgbagwoju anya, ọtụtụ nyocha, ma isi ọrụ ya bụ iwepụ ọnọdụ ndị na-eyi egwu, dị ka ọnya afọ (ụkwara afọ), angina pectoris, ọnọdụ tupu ọrịa ọrịa na nkụchi obi, mgbawa nke aorta gbasasịrị. . Iji chọpụta n'ụzọ ziri ezi ihe kpatara mgbaàmà ahụ, nchọpụta nke mgbu n'okpuru ubu aka ekpe kwesịrị ịgụnye omume ndị a:
Ajuju na nchịkọta anamnesis, gụnyere ihe nketa na ọkachamara. Onye ọrịa ahụ na-achọpụta otú mgbaàmà mgbu na-ejikọta ya na nri nri, na nke anụ ahụ, nkwụsị, nrụgide mmetụta uche, ebe mgbu na-egbuke egbuke, otú ọ na-adị.
Nleba anya ozugbo, ịge ntị na palpation. Ihe ọzọ a na-achọkwa bụ ịlele pulse, ọbara mgbali elu, ikekwe okpomọkụ ahụ.
A na-edepụta nyocha nke X-ray, mgbe mgbe n'ọtụtụ amụma, iji dokwuo anya ọdịdị nke pathologies nke ọkpụkpụ azụ azụ ma ọ bụ usoro broncho-pulmonary.
Electrocardiogram dị mkpa, nke na-egosi paramita nke obi.
Ikekwe nhọpụta nke CT, MRI. Tomography kọmpụta bụ usoro na-enyere aka ịkọwa ọrịa ahụ, nke X-ray na-ekpebighị.
Ọ bụrụ na ị na-enyo enyo gastritis, gastroesophageal reflux, GU, ọ ga-ekwe omume ịkọwa fibrogastroduodenoscopy - FEGDS.
CBC - ọnụ ọgụgụ ọbara zuru oke na nyocha mmamịrị, ikekwe nyocha biochemical nke ọbara ọbara, bụ usoro nyocha ọkọlọtọ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa ọ bụla.
Ọgwụgwọ mgbu n'okpuru aka ekpe ubu
Usoro ọgwụgwọ maka thoracalgia dị n'akụkụ aka ekpe, mgbu na ala nke scapula na-adabere kpọmkwem na nsonaazụ nke nchoputa. Ọgwụgwọ bụ isi nke mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe nwere ike jikọta ya na enyemaka nke nnukwu ọnọdụ na-eyi ndụ egwu. Ọ bụrụ na mmadụ na-arịa ọrịa akwara na-adịghị ala ala, mgbe ahụ, ịṅụ ọgwụ obi ga-enyere aka ịkwụsị mmetụta mgbu mbụ. Ọ bụrụ na mgbu ahụ akwụsịghị n'ime nkeji 5-10, a ga-akpọ ụgbọ ihe mberede. Mgbu mgbu nke ọnya afọ kpatara, osteochondrosis ma ọ bụ hernia (protrusion) na-akacha mma site n'enyemaka nke dọkịta, ọ bụghịkwa n'onwe gị, ya mere ọgwụgwọ nke mgbu aka ekpe bụ mmejuputa ndụmọdụ ahụike, ọ bụghị ndụmọdụ nke ndị ikwu. , ndị agbata obi ma ọ bụ ndị enyi. Ọgwụ onwe onye na-ebutekarị nsonaazụ dị mwute, ọkachasị ma a bịa n'ihe gbasara ọrịa obi.
Ọtụtụ mgbe, ihe ịrịba ama mgbu na azụ, ubu ubu bụ ihe na-atụgharị uche, ihe mgbu amụma, isi iyi nke dị na mpaghara ọzọ. Ya mere, mgbe ewepụsịrị nnukwu mgbu, a ghaghị ime usoro nyocha niile n'ụzọ zuru ezu. Ya mere, ọgwụgwọ nke mgbu na ala nke ubu aka ekpe bụ ọgwụgwọ nke ọrịa na-akpata, nke na-akpalite mgbaàmà mgbu. Usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka mgbu na azụ, na mpaghara nke ubu ubu nwere ike ime ndị dọkịta dị otú ahụ:
Onye na-agwọ ọrịa.
Ọgwụgwọ mgbu na mpaghara aka ekpe ma ọ bụ aka nri kwesịrị ịmalite site na nleta dọkịta obodo, ebe a ga-eme nyocha mbụ na ntụziaka nke omume ndị ọzọ. Ọzọkwa, a ga-ahọpụta usoro ọgwụgwọ niile site na ọkachamara dị warara mgbe ọ nwetasịrị nsonaazụ nyocha zuru oke.
Kedu ka esi egbochi mgbu n'okpuru ubu ubu aka ekpe?
Iji gbochie mgbaàmà mgbu, ọ dị mkpa iji chọpụta ihe kpatara ya, mgbe ahụ, mgbochi nke mgbu n'okpuru ogwe aka ekpe ga-adị irè n'ezie.
Ọ bụrụ na mmadụ na-ata ahụhụ site na angina pectoris, akwara ọbara akwara ọrịa, ma ọ bụ ugbua na-ata ahụhụ a myocardial infarction, kasị mma mgbochi nke mgbu n'okpuru ekpe ubu agụba bụ mgbe nile ojiji nke cardiological ọgwụ ọjọọ, nwayọọ mmega ahụ, nri na psycho-mmetụta mmetụta uche itule.
Ọ bụrụ na ihe mgbu na-akpata site na nrụrụ, usoro na-aga n'ihu na ọkpụkpụ azụ, mgbe ahụ, mgbochi mgbu kwesịrị ịgụnye ogologo oge n'oge a na-eme ihe omume ọgwụgwọ pụrụ iche, a na-ewere ọgwụ ndị na-abụghị steroidal anti-inflammatory.
A na-egbochi ihe mgbu na ala nke ubu, nke ọrịa eriri afọ na-akpalite, site na nri na-adịghị mma na ịṅụ antacids, ọgwụ ndị a na-enye ọgwụ. Tụkwasị na nke ahụ, YABZH na-adabere nnọọ na ọnọdụ mmetụta uche-psyche, ya mere àgwà ziri ezi, nkà nke usoro ntụrụndụ, usoro mgbochi nchekasị ga-enyere aka igbochi mgbu n'okpuru ubu ubu ekpe.
Usoro mgbochi na mgbochi nke mgbaàmà mgbu na mmepe nke ọrịa ahụ, n'ụkpụrụ, bụ, nke mbụ, nyocha nke mgbasa ozi mgbe niile. Ọbụna ma ọ bụrụ na enweghi ihe ịrịba ama na-akpasu iwe, ihe mgbu, ọ bara uru ịgakwuru dọkịta, na-eme nyocha mgbochi iji jide n'aka na ọ dịghị ihe mgbu ma ọ bụ ọrịa na-eyi gị egwu n'ọdịnihu dị nso.